निर्मलाको हत्या भएकै दिन गाउँबाट गायब एक दुर्व्यसनी फेरि किन काठमाडौँमा समातिए? (#WhoKilledNirmala १२) :: PahiloPost
निर्मलाको हत्या भएकै दिन गाउँबाट गायब एक दुर्व्यसनी फेरि किन काठमाडौँमा समातिए? (#WhoKilledNirmala १२)
6th December 2018, 04:47 pm | २० मंसिर २०७५
फोटो गुगल इमेजबाट तयार गरिएको हो।
महेन्द्रनगरबाट फर्केर उमेश श्रेष्ठ र सविन ढकाल -
'आज त रातभर निद्रै परेन।'
प्रहरीका 'खबरी'हरुले गाउँलेबाट यो सूचना पाएपछि उनी शंकाको घेरामा परेका थिए।
ब्युरो स्रोतका अनुसार पक्राउ परेलगत्तै उनले निर्मलाको हत्या गरेको स्वीकार गरे। कसरी? भनेर सोध्दा उनले भनेका थिए, ‘मुखमा सल कोचेर मारेको।'
सुरुमै हत्या स्वीकार गरेका युवकले पछि फेरि बयान फेर्न थालेका छन्। अहिले उनले 'जे गरे गर्नुस्, मैले हत्या गरेको छैन' भन्ने बयान दिन थालेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो।
यसअघि पनि 'मैले नै निर्मलालाई मारेको हो' भनेर स्वीकार्ने दुई व्यक्ति प्रहरीले भेटिसकेको छ। त्यसमध्ये एक जना जीवन घर्ती मगरले निर्मलालाई खुकुरीले हानेर मारेको बयान दिएका थिए।
निर्मला फोन चलाउँदैन थिइन्। प्रहरीले अर्को शङ्का गर्छ - कतै निर्मलाले नै आमाको फोनबाट कल गरेकी त थिइनन्? निर्मलाले नै फोन गरेको भए किन गरिन्?
'हो, त्यो नम्बरबाट फोन आएको थियो,' उसले स्वीकार्छ।
फोन गर्ने को थियो? प्रहरीको प्रश्नको जवाफमा उनको उत्तर थियो – 'निर्मलाकी आमा।'
निर्मलाकी आमाले आखिर किन फोन गरिन्? फेरि युवकले सहजै जवाफ दिन्छन्, 'उहाँले मलाई होइन, मेरो आमासँग बोल्न फोन गर्नुभएको हो।'
'भारतको वनबासा जाने बारेमा निर्मलाकी आमासँग कुराकानी भएको थियो,' उनले बयानमा भनेका छन्।
शव भेटिएको स्थान नजिकै पुगेका हामीसँग यस्तै गुनासो पोखे नवराज पाण्डेले। २२ वर्षका पाण्डेले भने, 'मलाई पनि गएको कार्तिकमा पुलिसले बोलाएर अण्टसण्ट सोध्यो। समितिका मान्छेहरुले पनि हैरानै बनाइरहेका छन्।'
बम दिदीबहिनी महिला भएकाले 'बलात्कार गर्न नसक्ने' भन्दै उनीहरूको डिएनए परीक्षण भएन। डिएसपी डिल्लीराज विष्टको टोलीले १ सय १७ जनासँग अनुसन्धानको कागज गराएको थियो। समिति फेरिएसँगै उनीहरू पटक-पटक अनुसन्धानको दायरामा आउने र छुट्ने गरेका छन्।
निर्मलाको हत्या भएकै दिन गाउँबाट गायब एक दुर्व्यसनी फेरि किन काठमाडौँमा समातिए? (#WhoKilledNirmala १२) को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Karan B. Shah [ 2018-12-07 19:24:44 ]
Excellent reportingby one of the best journalists of Nepal. This series will definitely clear confusion and wrong information provided by other medias and people.